June 2018 - Puntland Mirror Believable Media Website
June 30, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Xeer-ilaaliyaha Guud ee Puntland ayaa codsaday in lasoo qabto xisaabiyihii Wasaaradda Maaliyada Puntland ee gobolka Mudug. Maxamuud Xasan Aw-cusmaan, oo ah Xeer-ilaaliyaha Guud ee Puntland oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Garoowe maanta […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo diyaaradood oo sida 84 qof oo Soomaali ah ayaa Jimcadii soo gaaray magaalada Muqdisho, ee caasimada Soomaaliya. Dadka ayaa laga soo masaafuriyay dalka Mareykanka, sida ay warbaahinta u sheegeen masuuliyiinta Dowladda Federaalka […]
June 29, 2018 Puntland Mirror 0
Kampala-(Puntland Mirror) Taliyaha ciidamada Soomaaliya Janaraal Cabdiweli Jaamac Xuseen ayaa dhiggiisa dalka Uganda Janaraal David Muhoozi kulan kula yeeshay magaalada Kampala. Labada Janaraal ayaa ka wadahadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan ammaanka gobolka iyo […]
Puntland oo isku dartay haayadaha sirdoonka ee PIA iyo PSS
June 28, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha wasiirada Puntland ayaa u codeeyay in la isku daro haayadaha PIA iyo PSS oo laga dhigay PISA, kulankii asbuuclaha ahaa ee maanta oo Khamiis ah ka dhacay Garoowe. Magaca cusub ayaa imaanaya […]
Puntland combines PIA & PSS Intelligence Agencies
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland cabinet ministers have voted to combine PIA (Puntland Intelligence Army) and PSS (Puntland Security Service) as the Puntland Intelligence and Security Agency (PISA) in its Thursday’s weekly meeting in Garowe. The new […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa isku shaandeyn balaaran ku sameeyay agaasime waaxeedyada maamulka iyo maaliyada ee wasaaradaha. Digreetada isku shaandeynta ah ee kasoo baxday xafiiska madaxtooyada maanta oo Khamiis ah ayaa saameyn […]
June 27, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Warar sirdoon ayaa sheegaya in hoggaamiyihii maleeshiyada Al-Shabaab uu geeriyooday. Sargaal sirdoonka Soomaaliya katirsan oo magaciisa qariyay ayaa laanta Af-Soomaaliga ee VOA u sheegay in Axmed Cumar Cubeydah uu ku geeriyooday meel kutaala […]
June 26, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa ciidamo dheeri ah u diraysay deegaanka Tukaraq asbuucyadii lasoo dhaafay, taasoo muujineysa u diyaargaroow dagaal. Asbuucyadii dhawaa ee lasoo dhaafay, ciidamo aad u hubeysan ayaa gaaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool […]
June 25, 2018 Puntland Mirror 0
Jabuuti-(Puntland Mirror) Urur goboleedka IGAD ayaa shaqada ka ceyrshay kornayl Gabrezabher Alemsged oo Soomaalidu u taqaan “Janaraal Gabre”, sida lagu sheegay digreeto maanta oo Isniin ah kasoo baxday xoghayaha Guud ee IGAD Maxbuub Maalin. Janaraal Gabre […]
June 25, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Ankara-(Puntland Mirror) Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay shan sanno oo cusub ee madaxtinimada Turkiga. Sadi Guven, oo ah madaxa doorashooyinka ayaa sheegay in madaxweynuhu helay codadkii ugu badnaa ee loo baahnaa. Erdogan ayaa helay […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyeyaal ciidan oo dhawaan kasoo gootay maamulka Somaliland ayaa maanta oo Khamiis ah soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimada dowladda Puntland. Taliyeyaasha ayaa duleedka magaalada waxaa ku soo dhaweeyay masuuliyiin katirsan haayadaha dowladda [...]